nattalin: "အနုံညာတ စစ်သည်တော်"
ခင်ဗျားတို. ကျွန်တော်တို.လို ကိုယ့်ကိုထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်မနေခဲ့ဘူး
ခင်ဗျားတို. ကျွန်တော်တို.လို လူတစ်ယောက်က
တော်လွန်း တတ်လွန်းလို. မဟုတ်ခဲ့ဘူး
မျိုးစေ့လေးက သစ်တောကြီးတစ်ခုလုံးကို ပေးသွားခဲ့သလို
ရေပေါက်လေးက တိမ်တွေအားလုံးကို စုရုံးခေါ်ငင်ရွာချခဲ့သလို
လေပွေလေးက မုန်တိုင်းကြီး တစ်ခုလုံးအစပျိုးပေးခဲ့သလို
သူခေါင်းဆောင်လို. မကြေငြာပဲနဲ. သူ.နောက်ကို အားလုံး လိုက်ခဲ့ကြတယ်။
အနည် အမှုန်တွေ ကွယ်ဝှက်မထား
မှန်သားလို ကြည်လင် ထွင်းဖောက်မြင်ရတဲ့သူ.စိတ်ကိုချစ်လို.ပေါ့
၀တ်စုံ နှစ်စုံပဲရှိတဲ့ သူ.စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားလို.ပေါ့
ဘယ်သူတွေ သူ.လောက် စွန်.လွှတ်စိတ်ထားဘူးလဲ
ငါယူမယ် ငါပေးမယ် မပြောပဲ
ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာ ကျောင်းတော်ကို စွန်.ခွာခဲ့ရတယ်
ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာ ပခုံးပေါ်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးတာဝန်တွေ တင်ထားခဲ့ရတယ်
ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာ အယူအဆဆန်.ကျင်ဘက်တွေကို စုစည်းနိုင်ခဲ့တယ်
ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာ သွေးအစက်စက်နဲ. ကျဆုံးခဲ့ရတယ်
အို ……. အဖ ၊ ဒီလိုပေးဆပ်မှုမျိုးကို
သူရဲကောင်း ဘ၀ဆိုတာ ငွေပေးဝယ်ထားတာမဟုတ်ဘူး
ကျောက်စာထွင်းထုလိုက်သလို ဗီဇထဲအထိ စွဲနစ်သွားတာ
မျိုးရိုးအဆင့်ဆင့်အထိ သွေးကြောထဲမှာ စီးဆင်းလိုက်ပါသွားတာ။
စာအုပ်တွေ မထုတ်လည်း သိနေမယ်
ပါးစပ်တွေကို ပိတ်ထားလည်း ထုတ်လွှင့်နေမယ်
အမှန်ကို လုပ်ဖို. အသက်ပေးခဲ့တယ်
အမှန်ကို အမှန်လို.တောင်ရဲရဲ မပြောရဲဘူး
တို.ဘ၀တွေ အတွက် သနားနေမှာလား
တို.အကြောင်းတွေ အတွက် သံဝေဂရမှာလား